Tabaha looga gudbo dhibaatada xiriirka. Wadahadalku waa xalka | Ragga Stylish
Laba qof noloshooda ayaa ka buuxa waqtiyo wanaagsan iyo kuwo kale oo aan sidaa u badnayn. Haddii uu jiro jacayl iyo rabitaan dhab ah oo lagu sii socdo, waa in dadaal la galiyaa si looga hortago in waqti xun uu noqdo dhammaadka.
Waa inaan u qaadanno taas dhibaatooyinka lamaanaha badanaa lama huraan. Su'aasha aasaasiga ahi waxay tahay ogaanshaha sida loola kulmo.
Goorma Dhibaatooyinka lamaanaha ayaa dhaca, waxa ugu horreeya ayaa ah in la aqoonsado. In kasta oo ay u muuqan karto xoogaa xanuun ah, haddana waa lagama maarmaan. Ficilkani wuxuu u baahan yahay dheelitirka: Maahan ku-biirinta jagooyinka wax lagu eedeeyo haddii ay intaa ka sii badan tahay, mana ka buuxsamo is-buun-buunin buunbuunin ah.
Isagoo nadiifinaya dhibcaha daciifka ah, tallaabada xigta waa in la dejiyo qorshe lagu xoojinayo. La jahwareer iyo is casilaad Kuwani waa laba erey oo ay tahay in lagu beddelo ballanqaad iyo rabitaan ah in wax la beddelo.
Waxay la kulantay dhibaatada lamaanaha, jacaylka, wada xiriirka, ixtiraamka iyo dulqaadka
"Jacaylku wuu guuleystaa dhammaan". Mabda 'waxaa badanaa loo qaataa run run ah, in kastoo jacaylka oo keliya mucjisooyin ma sameeyo. Waxaa jira waxyaabo kale oo ay tahay inay ku dhexjiraan cilaaqaadka si uu ugu sii noolaado waqti kadib.
La wada hadal daacad ah iyo wada hadal waa arrimo muhiim ah. Faa'iido ma lahan in wax la keydiyo iyadoo laga baqayo in waxyeello loo geysto kooxda kale ama sabab kale. Waa inaan la xiriirnaa oo aan u sheegnaa waxa na dhibaya, had iyo jeerna xushmadda dhexdeeda.
Khilaafyo badan ayaa ka dhashay maxaa yeelay labada midkood waxaa dhibaya dhinacyo gaar ah oo kan kale ah, laakiin xilligan lagu dhawaaqayo, ficilku wuxuu umuuqdaa mid si toos ah loogu jihaynayo qofka marka loo fiiriyo ficilka, oo ku dambeeya abuurista kala-bax cusub iyo xalka xalka.
Marka ay tahay Hooska kala tagga ayaa soo dhowaanaya, sida caadiga ah waxaa jira laba mowqif oo iska soo horjeeda: midka doonaya inuu joojiyo midowga iyo kan aan diidin.
Mid kasta isku dhaca aadanaha ayaa laga yaabaa inuu xal u helo. Waxa ku habboon waa inaad diyaar u tahay inaad hesho.
Ilaha Sawirka: QTopLife / Aragtida Maskaxda
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Dhibaatooyinka xiriirka, sida looga gudbo
Shan siyaabood oo laysku daro shaadhka polo cad